Akụrụngwa-Chuanghe Fastener Co., Ltd
oyi isi skru ngalaba
Ngalaba na-ahụ maka isi na-ekpo ọkụ na isi na-eji igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ dị elu, nke dị mfe iji rụọ ọrụ ma nwee arụmọrụ dị elu. Ngalaba a na-ewepụta isi dị iche iche, ndị na-eche nche, ndị isi oval, hexagons dị n'ime na ụdị isi ndị ọzọ na-abụghị ọkọlọtọ.
Na mgbakwunye, a na-enye anyị akwa igwe na-agba ọsọ dị elu maka ịhazi n'ihu elu nke bolts ahụ. Nke a na-enyere anyị aka imepụta ngwaahịa ịghasa ya na ihe mgbagwoju anya yana nsogbu nrụpụta dị elu.
ngalaba oyi na-atụ isi
Ngwongwo akụrụngwa anyị bụ igwe igwe nri na - arụ ọrụ nke ukwuu, nke na - eme ọ bụghị naanị na - arụpụta ngwa ahịa batrị nke ọma, kamakwa ọ na - arụ ọrụ ebe dị iche iche, na - eme ka ọ dị mma maka mkpụrụ osisi hex na akụkụ a na - enweghị atụ.
Igwe eji igwe ọfụma na-arụ ọrụ pụrụ iche dị mfe iji rụọ ọrụ, yana ọmarịcha akpaaka iji hụ na usoro eri ndị edozi.
cnc akpaka omumuihe
Anyị nwere ikike inye ndị ahịa ọrụ ntụgharị CNC. Ejiri CNC CNC nwee ngwa 27 setịpụrụ igwe eji eme ihe n ’igwe elekere iji gha eme ihe. Naanị dozie ma gbanwee ihe omume CNC iji hazie akụkụ dị iche iche gbagwojuru anya. N'ihi njiri ya na ịdị elu ya dị elu, enwere ike ịhọrọ oke mbelata nke ọma, yabụ ọkwa nrụpụta ji okpukpu atọ ruo ise karịa ngwaọrụ igwe ndị ọzọ na-ahụkarị, si otú a belata ụgwọ ọrụ anyị.